အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းသိသင့်တဲ့သတင်းများ
21 ต.ค. 2561 - 09:25 น.
အာဏာပိုင်တွေ မပါပဲ ဒေသခံတွေနဲ့ သီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့
၁။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ယုံကြည်ဖွယ်ရာ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးလုပ်ပါလို့ ကုလ ထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စဘူဂါနာ တိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်ဖွယ်ရာ အချက်အလက်ရှာဖွေရေးကိုလုပ်ပါလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့တဲ့ ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတင်းရှရာနာ ဘူဂါနာ တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို မစ္စဘူဂါနာရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အပြီး မနေ့က ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် ထဲမှာ အခုလိုရေးသားထားခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအရေးကြီးဆုံးအချက် ၂ ချက်ကတော့ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုနဲ့ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။
တာဝန်ရှိမှု တာဝန်ခံမှုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဟာ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အကြပ်အတည်းကိုရည်ညွှန်းပြီး တိုက်တွန်း ထားပါတယ်။
မစ္စဘူဂါနာဟာ ဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ အရပ်ဖက် စစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလို ရခိုင်နဲ့ ကချင် ပြည်နယ် က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရခိုင်က ဒုက္ခသည်ရွာတရွာကို ကုလ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ် သွားရောက်
၂။ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် တင်္နသာရီကိုဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပရာချရက် ခိရီခန်မြို့ (Prachuap Khiri Khan)အနီးကနေ ကုန်းတွင်းကိုဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက် ခဲ့တဲ့ မုန်တိုင်းငယ်ဟာ အောက်တိုဘာ ၂၀ရက်နေ့ညပိုင်းက တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကို လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်းအဖြစ် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းငယ်ရဲ့အရှိန်နဲ့ ရန်ကုန်၊ ဘားအံအပါအဝင် မြို့နယ်အချို့မှာ လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ဓာတ်တိုင်တွေပြိုလဲကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
အပူပိုင်း မုန်တိုင်းငယ် (Tropical Depression)ဟာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးတနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာ လေဖိအား နည်း ရပ်ဝန်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ် လို့လည်းသိရပါတယ်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်က အမေရိကန်နဲ့ ရှရှားနိုင်ငံအကြား နျူကလီယားလက်နက် ထိန်းချုပ်ရေးသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့
၃။နျူကလီယားလက်နက် ထိန်းချုပ်ရေးသဘောတူစာချုပ်ကနေ အမေရိကန်နှုတ်ထွက်မယ်
စစ်အေးခေတ်ကာလ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တုန်းက သမိုင်းဝင် ရယူထားခဲ့တဲ့ တာလတ်ပစ် နျူကလီယား ဒုံးလက်နက် ထိန်းချုပ်ရေး သဘောတူမှုကနေ နှုတ်ထွက်မယ်လို့ အမေရိပန်ထရမ့်အတည်ပြုပြော ဆိုလိုက် ပါတယ်။
အဲဒီသဘောတူမှုကြောင့် နျူကလီးယားထိပ်ဖူးတပ်တာလတ်ပစ်ဒုံးလက်နက်တွေ ရာပေါင်းများစွာဖျက်ဆီးခဲ့ တဲ့အထိ ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားက ဒီစာချုပ်ကို မလိုက်နာပဲနေတာကြာပြီလို့ မစ္စတာထရမ့်က အကြောင်းပြခဲ့ပြီး ဒီစာချုပ်ထဲကနေ ထွက်ဖို့ သမ္မတ အိုဘားမားလက်ထက်တုန်းက ဘာလို့မလုပ်ခဲ့တာလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့လည်း ပြောဆို ပါတယ်။
အာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာ အိုင်အက်စ်နဲ့ တာလီဘန် တွေရဲ့ လက်နက်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အံတုပြီး အခုလို မဲပေးခဲ့တာဖြစ်
၄။အာဖဂန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားက မဲလာပေးသူအရေအတွက် ၃သန်းရှိခဲ့
ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ အစိုးရရဲ့တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းတွေအရ မဲလာပေးသူ အရေအတွက် ၃သန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကြားက အာဖဂန်ပြည်သူတွေဟာ အိုင်အက်စ်နဲ့ တာလီဘန် တွေရဲ့ လက်နက်ကိုင်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အံတုပြီး အခုလို မဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မဲရုံတွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗုံးခွဲမှုတွေလည်းနိုင်ငံတလွှားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ကဘူးလ်မြို့တော် အသေခံဗုံးခွဲမှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦးနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၂၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ မဲရုံအချို့ကို ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့မှာ မဲဆက်လက်ပေးနိုင်အောင် ဖွင့်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းသိသင့်တဲ့သတင်းများ